Wararka - Godadka: Maxay yihiin sideena uga hortagnaa?
Waxaa qoray Caitlin Rosemann
AT Still University - Dugsiga Ilkaha ee Missouri iyo Caafimaadka Afka
Ma ogtahay in dhaldhalaalka ilkaha uu yahay walaxda ugu adag jirka aadanaha. Dhaldhalaalka ayaa ah lakabka sare ee ilkaheena ka ilaaliya. Bakteeriyada ku jirta afkeena waxay u isticmaashaa sonkorta aan cunno inay sameyso asiidhyo duugoobi kara lakabkan difaaca, sameysmaya dalool. Markii dhaldhalaalka la waayo, dib uma soo baxo. Tani waa sababta dhakhtarkaaga ilkaha iyo dhakhtarka ilkaha ay marwalba kuu sheegaan inaad ku cadayato daawada ilkaha ee foloraydhka ah isla markaana aad ku nadiifiso ilkahaaga dhexdooda! Waxaad ka baran kartaa wax badan oo ku saabsan godadka iyo sida looga hortago hoosta.
Waa Maxay Dalool?
Dalool waa dalool ilkahaaga ah. Dalool ku jira marxaladda hore waxay umuuqan kartaa bar cad, oo la bogsan karo. Waqti ka dib, waxay umuuqan doontaa bar baro ama madow. Gododku waxay noqon karaan kuwo yaryar ama weyn. Gododku waxay ka samaysan karaan meelo badan, laakiin waxay badanaa ka samaysmaan dusha ilkahaaga meesha aad wax ka qaniinto iyo inta u dhexeysa ilkahaaga oo cuntada ku dhegto Godadka aan la hagaajin waxay sababi karaan xasaasi, xanuun, infekshanno, waxayna xitaa kuu keeni karaan ilkaha. Sida ugu wanaagsan ee ilkahaaga loo ilaalin karo, caafimaadkoodana loo ilaalin karo ayaa ah ka hortagga godadka.
Maxaa Sababa Godadka?
Ilmahaagu weligood ma dareemaan "wareer" cuntada ka dib? Miyaad dareentaa markaad cadayato oo xoqdo dareemahan shucuurtu ka baxdo? Marka aynaan cadayan oo aan xoqin bakteeriyada iyo cuntooyinka aan cunno waa ay dhismaan oo ay sameystaan ​​walax dheg dheg ah oo la yiraahdo plaque (plak).
Maalintii oo dhan, bakteeriyadu waxay quudisaa cuntooyinka aan cunno. Markaan wax cuneyno ama cabeyno sonkor, bakteeriyada afkeenna ku jirta waxay u isticmaalaan inay ku noolaadaan oo ay ka sameystaan ​​aashito. Asiidhkani wuxuu ku sii nagaadaa ilkaheena wuxuuna weeraraa dusha sare ee ilkaha. Waqti ka dib, aashitada ayaa gasha ilkaha, taas oo keenaysa dalool.
Si loo fahmo sida daloolku u sameysto, aan eegno waxa ka kooban ilig. Dhaldhalaalka ayaa ah daboolka adag ee dibadda ka ilaaliya ilkaha. Dhaldhalaalka hoostiisa waxaa ku yaal ilkaha. Dentin uma adka sida dhaldhalaalka. Tani waxay u sahlaysaa godadka inay faafaan oo weynaadaan. Dentin ka hooseeya waa saxarka. Saxarka waa meesha ay ku nool yihiin neerfaha iyo dhiig bixinta iligga.
Haddii daloolla aan la hagaajin, bakteeriyadu waxay ka soo safri kartaa dhaldhalaalka ilaa dentin waxayna gaari kartaa saxarka. Haddii bakteeriyada ka soo baxda daloolka ay soo gasho saxarka, waxay noqoneysaa infekshan.
Infekshannada ilkuhu waxay noqon karaan kuwo halis ah oo nafta halis geliya haddii aan la daaweyn. U tag dhakhtarkaaga ilkaha isla markiiba haddii aad aragto mid ka mid ah kuwan soo socda:
• Barar ku ah wejigaaga ama afkaaga
# Guduudasho gudaha ama hareeraha afkaaga
# Xanuun afkaaga ah
• Dhadhanka xun ee afkaaga
Ayaa Khatar ugu jira godadka?
Carruurta, dhalinyarada, iyo dadka waaweynba dhammaantood waxay halis ugu jiraan inay yeeshaan daloollo. Waxaad halis dheeraad ah ugu jirtaa haddii:
• Cunto fudud inta u dhexeysa cuntada
• Cun cuntooyin iyo cabitaanno sonkor leh
• Aad leedahay taariikh qofeed iyo / ama qoys oo daloola
• Ilkaha dillaaceen ama jajabeen
# Qaado daawooyinka sababa afka qalalan
• Aad qaadatay daaweyn shucaac madaxa ama qoorta ah
Sidee loo daweeyaa godadka godadka?
Godadka waa in uu daweeyaa dhakhtarka ilkaha. Dhakhtarka ilkaha waxaa loo tababaray inuu arko godadka. Daloolka marxaladda hore waxaa lagu hagaajin karaa foloraydh. Haddii daloolku ka sii qoto dheer yahay, hagaajinta keliya ayaa laga yaabaa inay noqoto dhakhtarka ilkaha inuu ka saaro godka oo uu ka buuxiyo aagga alaab qalin ama caddaan ah. Haddii iliggu leeyahay dalool weyn, wuxuu u baahan karaa daaweyn aad u adag.
Sideen U Yarayn Karaa Halista Godka Godka?
# Ku cab biyo fluoride
• Ku caday dawada ilkaha ee foloraydhka ah 2 jeer maalintii
• Ka fogow cuntooyinka iyo cabbitaannada sonkorta leh, sida nacnaca iyo soodhaha. Ha ku cabbin ama ha ku cunin maalintii oo dhan. Haddii aad cuni doontid ama cabbi doontid waxyaabo macaan samee xilliyada cuntada.
• Xaddid cunnada fudud ee macaan inta u dhexeysa xilliyada cuntada
• Nadiifi ilkahaaga dhexdooda maalin kasta
• Booqo dhakhtarkaaga ilkaha si joogto ah
• Dahaadhku waxaa la saari karaa ilkaha dhabarka si looga ilaaliyo inay si fiican uga ilaaliso bakteeriyada keenta daloolada godadka godadka.